ိdownload speed & upload speed သိလိုလျှင် — MYSTERY ZILLION
ိdownload speed & upload speed သိလိုလျှင်
သိပြီးသား mz မှာပြောပြီးသားဆိုရင်လဲ ငချွတ်ငခြောက်လေးမလို ့ခွင့်လှ ွတ်ပါ
ိdownload speed & upload speed သိလိုလျှင် speedtest.net မှာကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်
ip adress လဲပါပါတယ်
စစ်ကြည့်ရင်တော့ စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ ထွက်လာတဲ့ result ဟာ
တိကျသေချာတဲ့ result ဟုတ်လိမ့်မယ်မထင်ပါ .. speed ဆိုတာ အချိန်နှင့် အလိုက် အနှေးအမြန် အတက်အကျဆိုတာ ရှိနိုင်ပါတယ် ..(pcworld site မှာ သူတို့စမ်းသပ်ပုံများကို ဖေါ်ပြထားပါတယ်..အတိအကျမမှတ်မိတာကိုခွင့်လွတ်ပါ) အခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ စမ်းသပ်ပြီးမှ အနီးစပ်ဆုံး result တစ်ခု ထွက်ပါလိမ့်မယ် .. နောက်ပြီး တစ်ခြား strong ဖြစ်တဲ့ third party tool များနှင့်လည်း အကြိမ်ကြိမ်အခါခါစမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်.. upstream downstream များ ကို third party tool များနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်း ကွာသွားနိုင်ပါတယ်..ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာအခြေအနေ performance ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်.. speed များကို စစ်ဆေး ခြင်းဟာ ကျွန်တော့် (တစ်ဦးတည်း)အတွေ့အကြုံအရ တော်တော်ကို လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်တဲ့ ပြသနာ တစ်ခုပါ .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ .. ကျွန်တော့် ၀ါသနာတစ်ခုလိုဘဲ ပြောရမလားမသိဘူး .. hardware တစ်ခုခု(ဥပမာ-MB,RAM,CPU,GPU etc...) ၀ယ်လာရင် အဲဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းကို အသေစစ်တာ .. သူတို့ပြောတဲ့နည်းတွေအတိုင်း စစ်ပေမဲ့လည်း ...speed က သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းထွက်မလာလို့ .. စိတ်ဆိုးခဲ့ရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါဘဲ(ကိုယ် စစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်း (သောက်) တလွဲဖြစ်တာလည်း ပါချင်ပါမှာပေါ့လေ:D) .. အဲဒါကြောင့် speed နဲ့ပတ်သက်လို့ ပုံသေရ..ရမယ်ဆိုတာတွက်ထားရင် မှားပါလိမ့်မယ် ..(ကျွန်တော် ပြောတဲ့ hardware တွေရဲ့speed က default ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး.. over clock speed ကိုပြောတာပါ).. ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံလေးကို ကြုံလို့ပြောပြလိုက်တာပါ...
တိကျသေချာတဲ့ result ဟုတ်လိမ့်မယ်မထင်ပါ .. Speed ဆိုတာ အချိန်နှင့် အလိုက် အနှေးအမြန် အတက်အကျဆိုတာ ရှိနိုင်ပါတယ် ..(pcworld site မှာ သူတို့စမ်းသပ်ပုံများကို ဖေါ်ပြထားပါတယ်..အတိအကျမမှတ်မိတာကိုခွင့်လွတ်ပါ) အခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီး အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ စမ်းသပ်ပြီးမှ အနီးစပ်ဆုံး result တစ်ခု ထွက်ပါလိမ့်မယ် .. နောက်ပြီး တစ်ခြား strong ဖြစ်တဲ့ third party tool များနှင့်လည်း အကြိမ်ကြိမ်အခါခါစမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်.. Upstream downstream များ ကို third party tool များနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်လည်း ကွာသွားနိုင်ပါတယ်..ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာအခြေအနေ performance ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်.. Speed များကို စစ်ဆေး ခြင်းဟာ ကျွန်တော့် (တစ်ဦးတည်း)အတွေ့အကြုံအရ တော်တော်ကို လွယ်မယောင်နဲ့ ခက်တဲ့ ပြသနာ တစ်ခုပါ .. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ .. ကျွန်တော့် ၀ါသနာတစ်ခုလိုဘဲ ပြောရမလားမသိဘူး .. Hardware တစ်ခုခု(ဥပမာ-mb,ram,cpu,gpu etc...) ၀ယ်လာရင် အဲဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းကို အသေစစ်တာ .. သူတို့ပြောတဲ့နည်းတွေအတိုင်း စစ်ပေမဲ့လည်း ...speed က သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းထွက်မလာလို့ .. စိတ်ဆိုးခဲ့ရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါဘဲ(ကိုယ် စစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်း (သောက်) တလွဲဖြစ်တာလည်း ပါချင်ပါမှာပေါ့လေ:d) .. အဲဒါကြောင့် speed နဲ့ပတ်သက်လို့ ပုံသေရ..ရမယ်ဆိုတာတွက်ထားရင် မှားပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံလေးကို ကြုံလို့ပြောပြလိုက်တာပါ...